eHimalaya Online || News from nepal » एक बोतल पानीको मूल्य एक महँगो कार बराबर किन यति महँगो छ त यो पानी ? हेरौ तस्बिरसहित ।
एक बोतल पानीको मूल्य एक महँगो कार बराबर किन यति महँगो छ त यो पानी ? हेरौ तस्बिरसहित ।
२०७८ असोज २९ गते शुक्रबार ०२:२८
एजेन्सी, पानी जीवन हो। हामी धेरै बर्ष देखि यो सुन्दै आएका छौं। डाक्टरहरुले मानिसहरुलाई धेरै पानी पिउन सल्लाह दिन्छन्। तर संसारमा पानी को धेरै ब्रान्डहरु छन् जो धेरै महँगो छन्। आउनुहोस् हामी तपाईंलाई पानी को ब्रान्ड को बारेमा...
एजेन्सी, पानी जीवन हो। हामी धेरै बर्ष देखि यो सुन्दै आएका छौं। डाक्टरहरुले मानिसहरुलाई धेरै पानी पिउन सल्लाह दिन्छन्। तर संसारमा पानी को धेरै ब्रान्डहरु छन् जो धेरै महँगो छन्। आउनुहोस् हामी तपाईंलाई पानी को ब्रान्ड को बारेमा बताउँछौं जसको मूल्य लाख मा छ। तपाइँलाई पत्यार लाग्दैन, तर यो बिल्कुल सत्य हो। पानी को एक बोतल को लागत संसार मा सबैभन्दा महँगो छ कि त्यो मूल्य को लागी एक विलासी मर्सिडीज कार किन्न सक्छ।
Acqua di Cristallo TributoaModigliani संसारमा बेच्ने सबैभन्दा महँगो बोतलबंद पानी हो। यो पानी फिजी र फ्रान्स मा एक प्राकृतिक वसन्त बाट आउँछ। यो बोतल को प्याकेजिंग लागत धेरै उच्च छ। यस पानीको पनि एक विशिष्ट स्वाद छ। तर तपाइँ पानी को लागत थाहा पाएर छक्क पर्नुहुनेछ।
७५० मिलीलीटर पानी को लागत लगभग ७० लाख
संसारको सबैभन्दा महँगो पानी को एक बोतल को लागत लगभग ७० लाख रुपैयाँ छ। यो बोतलमा १ लिटर पानी पनि छैन। यसमा मात्र ७५० मिलीलीटर पानी राखीएको हुन्छ । एक रिपोर्टको अनुसार, Aqua di Cristello TributoaModigliani पानी को एक बोतल ७० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुन्छ। यो पानी को बोतल २४ क्यारेट सुन बाट बनेको छ।
त्यहाँ पानी को एक बोतल लाख रुपैयाँ लागत को लागी धेरै कारणहरु छन्। पानी महँगो हुनुको कारण यसको बोतल पनि हो। यो पानी को बोतल २४ क्यारेट ठोस सुन बाट बनेको छ। संसारको सबैभन्दा महँगो पानीको बोतल संसारको सबैभन्दा प्रसिद्ध बोतल डिजाइनर फर्नांडो Altamirano द्वारा डिजाइन गरीएको छ। Cognac Dudogne हेरिटेज हेनरी IV को संसारको सबैभन्दा महँगो बोतल फर्नांडो द्वारा डिजाइन गरीएको थियो। यो पानी को स्वाद पनि धेरै फरक छ। यस बाहेक, यो सामान्य पानी भन्दा धेरै ऊर्जा भएको हुन्छ ।
प्रकाशित मिति २०७८ असोज २९ गते शुक्रबार ०२:२८